Izay Nampianarin’ireo ‘Tatin-jaza’ Ahy Mikasika An’i Eoropa · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Marsa 2019 6:12 GMT
Vakio amin'ny teny ਪੰਜਾਬੀ, Ελληνικά, русский, македонски, Español, Italiano, Português, Nederlands, srpski, Français, 日本語, English
Roa taona lasa izay, raha vao tonga tao Alemaina aho amin'ny maha-mpianatra ahy, nahagaga ahy ny nahita an'ireo reny nampiasa tatin-jaza vita amin'ny lamba, sahala amin'ny fanaon'ireo olona any Tiorkmenistana tanindrazako, efa ho ampolo taona maro lasa. Na dia mandalo fotoan-tsarotra ara-toe-karena aza i Tiorkmenistana ankehitriny, tian'ireo ray amandreny ny mampiasa ireo tatin-jaza fanary nafarana avy any ivelany ka nanary ireo tatin-jaza azo sasàna nentim-paharazana efa anjato taona, izay heverina ankehitriny hoe lany andro. Ahoana no mbola isafidianan'ireo Eoropeana Tandrefana, izay mananjara kokoa ara-bola mitaha amin'ireo Tiorkmena antonony, ny tatin-jaza lamba, indrindra fa manana karazana marika marobe izy ireo amin'ny tatin-jaza fanary maoderina?
Teo am-pikarepohana ‘escalope ‘ tao amin'ny toerana fisakafoan'ny mpianatra sy fiadiana hevitra teo ampisakafoanana antoandro, nazava tamiko ihany koa fa maro ireo namako mpiray kilasy tamiko sy ireo mpampianatra teny alemà no nanaraka ny fomba fihinana antsoina hoe “mahay mitsinjo”, izay midika fa fialàna amin'ireo sakafo sasany mba hampihenana ny vokany eo amin'ny tontolo iainana eto ambonin'ny tany. Tsy afaka ny tsy hanontany tena aho hoe ” tsy “mahay mitsinjo” ve izaho – sy anisan'izany ireo Tiorkmena rehetra – izay ny hena no tena foto-tsakafony voalohany?”
Tamina fihetseham-po tsy dia nampahazo aina loatra no nanombohako tao Alemana satria tsy takatro ny kolontsaina alemàna ary sahirana aho niditra ho isan'olona tao aminilay firenana iantranoako. Mba tsy hahatsapako fa voahilikilika aho sy mba hilonako ao anaty vondrom-piarahamonina vaovao, nanomboka nampiana-tena momba ireo fomba fahalalana sy fiaina ao Eoropa Andrefana aho. Tontolo “vaovao” iray tanteraka no hitako, izay mivoatra sy amin'ny ampahany goavana dia tsy hay ivelan'i Tiorkmenistana. Nianarako ny mikasika ny fiovàn'ny toetrandro, ireo tanjona fampiroboroboana maharitra, ny toekarena miendrika faribolana, ny fikatrohana fiarovana tontolo iainana, ny fiainana mampihatra ny fitsitiana raka izay tratra (minimalism) sy ny fomba fiaina ara-ekolojika. Miaraka amina fidirana tsy misy teritery amin'ny aterineto sy amin'ny fampahalalam-baovao, nifoha ny saina tia manadihady tao anatiko ary nanomboka nihevitra an'ireo tsy mampiasa afa-tsy fisaina roa fototra, toy ny “mandroso” sy “efa lany andro”, ka mamerina manadihady indray ny politika ao Tiorkmenistana sy any Andrefana.
Tsapako fa raha toa marobe ireo olom-pirenena Alemàna nahazo fanabeazana tsara sy manana ny ampy ka naka fomba fisaina “matérialista teo aloha” ary mifantoka amin'ny kalitaon'ny fiainana sy ireo fomba fiaina miahy ny tontolo iainana ankehitriny, izhay ao Tiorkmenistana kosa mihalasa materialista. Rehefa tsy misy fanabeazana tsara kalitao sy fidirana mora foana amin'ny aterineto, saotra ho an'ireo Tiorkmena marobe ny hisina momba ny tontolo iainana sy hanana tanjona maharitra.
Ny fahazoana fampahalalam-baovao ihany koa dia ilaina mba hiantohana ny fandraisana andraikitry ny daholobe. Tsy mahagaga izany ny mahita an'ireo adolantsento Alemàna sy manerana an'i Eoropa Andrefana manontolo mandositra ny sekoly ary midina andalam-be mba hitaky amin'ireo olondehibe hiaro ny hoaviny hanoherana an'ireo loza voajanahary mifandraika amin'ny fiovàna toetrandro. Mandritra izany fotoana izany, tsy manan-kevitra ireo Tiorkmena marobe ny amin'ny hoe voakasik'izany ihany koa i Azia Afovoany, ary mety hiatrika fifandonana amin'ny resaka sisintany noho ny fiovàna toetrandro hampihena ny fahazoana rano madio.
Ny famborahana ataon'ireo governemanta mikasika ireo vaovao momba ny tontolo iainana, ny fampianarana ny momba ny teotrandro any an-tsekoly sy ny fahazoana vaovao, dia vato fototra amin'ny fiarovana ny zon'ireo olom-pirenena hahazo vaovao sy hahafahan'ny daholobe handray anjara na hitarika an'ireo ezaka fiarovana ny tontolo iainana. Ny fahatongavan-tsaina mikasika ny tontolo iainana dia mila ihany koa ny fiarovana fa halalaka ireo vaovao ary ho azon'ireo olom-pirenena rehetra sitrahana, izay tranga tsy misy mihitsy any Tiorkmenistana.
Etsy andaniny, tsy heveriko ho ampy tsara ny fahafantaran'ireo Eoropeana Tandrefana fa ny fitondrana fomba fiainana manaja ny tontolo iainana sy fanatrarana an'ireo tanjona fampiroboroboana maharitra dia endriky ny fananana tombony manokana. Mety tsy nandany ora maro ireo Alemàna mpiara-miasa amiko mba hilahatra sila-mofo iray, siramamy ary menaka. Rehefa tsy manana ahiahy ianao mikasika ireo tena filànao fototra, toy ny sakafo, mahazo fanabeazana sy vaovao tsara kalitao ary miaina anaty firenena demokratika, mora kokoa ny manao ho laharam-pahamehana ireo olan'ny tontolo iainana.